Burundi - BBC News Somali
Posted at 17:01 10 Agoosto 202017:01 10 Agoosto 2020
Dad dhagax tuuray kolonyo uu la socday madaxweyne oo lagu xukumay xabsi 30 sano ah
Waxaana la sheegay in dadkan ay dhagax tuureen kolonyo baabuur ah oo uu la socday madaxweynaha.
Posted at 2:20 14 Luulyo 20202:20 14 Luulyo 2020
Posted at 12:11 18 Juunyo 202012:11 18 Juunyo 2020
Madaxweynaha cusub ee Burundi oo xilka loo dhaariyay
Madaxweynaha cusub ee Burundi Evariste NdayishimiyeImage caption: Madaxweynaha cusub ee Burundi Evariste Ndayishimiye
Madaxweynaha cusub ee dhawaan la doortay ee dalka Burundi, Evariste Ndayishimiye ayaa maanta loo dhaariyay xilka madaxtinimada ee dalkaas, waxaana lagu waday Evariste Ndayishimiye in uu xilka la wareego bisha Agosto kaddib geeridii ku timid madaxweynihii hayay talada Pierre Nkurunziza.
Dadkii ka qeybgalayay munaasabadda caleemo saarka ayaa laga codsaday inay tegaan goobta xilli hore si loo qaado tallaabooyinka looga hortaggayo feyraska Korona sida gacmo dhaqa, sida ay ku warrantay wakalaadda wararka ee AFP.
Waxay arrintani imaaneysaa xilli toddobaadkii hore uu geeriyooday madaxweynihii Burundi Nkurunziza kaddib markii uu wadnaha istaagay.
Ninka haatan xilka loo dhiibay Evariste Ndayishimiye waxaa uu taageero ka helay Nkurunziza, waxaana la shaaciyay in uu ku guuleystay doorashadii bishii May ka dhacday dalkaas, taas oo ay mucaaradku sheegeen in lagu shubtay.
Posted at 22:02 12 Juunyo 202022:02 12 Juunyo 2020
Maxkamadda ugu sareysa Burundi oo go'aamisay qofkii badali lahaa Nkurunziza
Maxkamada ugu sareysa dalka Burundi ayaa soo saartay go'aan looga gol leeyahay in lagu so afjaro marnaan dhanka awoodda ah oo ka dhalatay geeridii lama filaanka ahayd ee Isniintii ku timid madaxwayne Pierre Nkurunziza.
Posted at 12:13 10 Juunyo 202012:13 10 Juunyo 2020
Geerida madaxweynaha Burundi ma ka faa'iideysan kartaa Rwanda?
Dalka Burundi waxaa uu ku gudo jiray diyaargarow ku aaddan sidii xilka loogu wareejin lahaa madaxweynaha dhawaan la doortay ee Evariste NDayishimiye, balse shalay waxaa geeriyooday madaxweynaha haya talada ee Pierre Nkurunziza kaas oo uu wadnaha istaagay.
Posted at 6:41 10 Juunyo 20206:41 10 Juunyo 2020
Taariikhda madaxweynihii Burundi ee geeriyooday
Markii ugu horreysay wuxuu ahaa ciyaartoy ka tirsanaa horyaalka heerka koowaad, kaddib wuxuu noqday tababare dhinaca ciyaaraha ah, kaddib wuxuu isu baddalay hoggaamiye fallaago, ilaa uu ka gaaray heer uu madaxweyna ka noqday dalka Burundi.
Posted at 14:41 9 Juunyo 202014:41 9 Juunyo 2020
Pierre Nkurunziza, madaxweynihii Burundi oo geeriyooday
Pierre Nkurunziza ayaa u geeriyooday wadne istaag ku soo booday, wuxuuna ahaa 55 sano jir.
Posted at 3:02 23 Jannaayo 20203:02 23 Jannaayo 2020
Madaxweynaha Burundi oo la siinayo $530,000 guri waynna loo dhisayo
Xildhibaannada ayaa sidoo kale waxa ay taageereen qorshe Madaxweyne Pierre Nkurunziza uu ku noqonayo "hogaamiyaha ruuxiga" ee dalkaas.
Posted at 15:24 9 Agoosto 201915:24 9 Agoosto 2019
Cunugii Youtube-ka laga jeclaa oo geeriyooday
Darcy Irakoze, oo loo yaqaanno Kacaman, ayaa u geeriyooday xanuunka Malaariyada
Posted at 12:17 14 Luulyo 201912:17 14 Luulyo 2019
Hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyay tallaabadaas